उकालो लाग्दै मृत्युदर,अवस्था थप जटिल : RajdhaniDaily.com
प्रशान्त वली - February 9, 2021 0
प्रशान्त वली - February 8, 2021 0
प्रशान्त वली - January 28, 2021 0
Home प्रदेश प्रदेश ३ उकालो लाग्दै मृत्युदर,अवस्था थप जटिल
काठमाडौं । देशभर कोरोना संक्रमित र मृत्युदर उकालो लागेपछि अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । अधिकांश अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिभराउ छन् भने अक्सिजन, सिलिन्डर, रेम्डेसिभिरलगायत औषधि चरम अभाव छ । स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्नेगरी संक्रमण दरको ‘ग्राफ’ दोब्बर बढ्न थालेको छ ।
सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउनुको साटो झनै बढ्दो क्रममा पाइएको छ । मंगलबार मात्रै २ सय २५ को कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । यो संख्या संक्रमण सुरु भएदेखि हालसम्मकै उच्च हो । अहिलेसम्म ४ हजार ८४ संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत बुधबारदेखि मंगलबारसम्म ६ सय ३१ जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
गत बुधबार ५८, बिहीबार ५४, शुक्रबार ५०, शनिबार ५३, आइतबार ५२, सोमबार १ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमित संख्या बढेसंगै देशभरका अधिकांश अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएको भन्दै बिरामी भर्ना गर्नै छाडेका छन् । समाचार तयार पार्दासम्म सक्रिय संक्रमित संख्या ९७ हजार ८ जना छन् ।
मंगलबार थप ९ हजार ४ सय ८३ मा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । २० हजार ५ सय ९६ को पीसीआर परीक्षण र ७ सय २० जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ । हाल, ४ सय ४८ संक्रमित क्वारेन्टाइनमा छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर १ हजार ८४ जना आईसीयू र २ सय ९० संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।
प्रदेश १ मा १ सय २७ आईसीयू र २९ भेन्टिलेटर, प्रदेश २ मा ६० आईसीयू र ३७ भेन्टिलेटर छन् । बाग्मती प्रदेशमा ५ सय २९ आईसीयू र १ सय ८४ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ८२ आईसीयू र ११ जना भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ६० जना आईसीयू र १३ जना भेन्टिलेटर, कर्णालीमा १ सय २ आईसीयू र ८ जना भेन्टिलेटर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ आईसीयू र ८ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
रोकथाममा स्वास्थ्य संरचना
सरकारले कोरोना रोकथममा स्वास्थ्य संरचना तयारी अवस्थामा रहेको बताए पनि व्यवहारतः त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अझै शैया, अक्सिजन अभावमा दैनिक गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारको नियन्त्रणमा १६ हजार शैया छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि अक्सिजन आयात तयारी थालिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी अक्सिजन उत्पादन क्षमता र मागमा अन्तर हुँदा गम्भीर संक्रमितले समस्या भोग्नुपरेको बताउ“छन् । ‘उत्पादन क्षमता र मागमा अन्तराल आएको छ,’ उनले भने, ‘मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था छ ।’
५१ सरकारी र ३६ निजी अस्पतालबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको जनाएको छ । जसअन्तर्गत १ हजार ७ सय ५ आईसीयू र ५ सय ७० भेन्टिलेटर व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले २९ अस्पतालसँग सम्झौता गरी संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ । ६ सय ४९ स्थानीय तहमा पाँच शैयाको कोभिड अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनका लागि ६४ करोड ९० लाख बजेट निकासा गरी अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
अक्सिजन प्लान्ट सुदृढ गर्दै आएको जनाउँदै मन्त्रालयले ९ सय ६६ अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरेको थियो । चीनबाट २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । जसमध्ये मंगलबार चार सय सिलिन्डर आइपुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । प्रत्येक कोभिड अस्पतालमा रेम्डेसिभिर पु-याउने योजना छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि अमेरिका, रसिया, बेलयात, चीनलगायत देशसँग पहल भइरहेको पनि बताए । कोरोना महामारीस“ग जुध्न अर्थ मन्त्रालयले थप १४ अर्ब स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताल कोभिड अस्पताल बनाउने भएको छ । स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
अवस्था थप जटिल
उकालो लाग्दै मृत्युदर
२० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजनीतिक दलहरुको यस्तो आयो प्रतिक्रिया
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम...
साढे २ घण्टापछि चल्याे टेलिकमको मोबाइल सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको ल्यान्ड लाइन र मोबाइल सेवा अवरूद्घ भएके साढे २ घण्टापछि सञ्चालनमा अएके छ । टेलिकमको कोर नेटवर्कमा समस्या आउँदा टेलिकमका...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा १५ घन्टा बहस हुने
काठमाडौं । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा आजबाट बहस सुरु भएको छ । बहसमा रिट निवेदक पक्षले...
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले ६० करोडको आईपीओ निष्कासनका लागि पायो ट्रिपल बी रेटिङ
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि ‘केयरएनपी ट्रिपल बी’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालका अनुसार उक्त रेटिङले...
किन फर्कन्छन् कन्यामबाटै पर्यटक ?
इलाम । झापाबाट इलाम पस्दा सवैभन्दा पहिला कन्याम आउने भएकाले पनि धेरैलाई जिल्लाको प्रमुख पर्यटकिय गन्तब्य कन्याम नै लाग्नु स्वाभाविक छ । चियावारीको जिल्ला...
शहिद परिवारलाई जागिर दिने मन्त्री साहको घोषणा
गौर । शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूका शहिद परिवारलाई जागिर दिने घोषणा गरेका छन् । आज रौतहटको माधव...
अर्थ भविन कार्की - May 15, 2021 0
भर्खरै प्रशान्त वली - January 18, 2021 0
गुल्मीको इस्मामा अन्तराष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला निर्माण हुँदै
खेल प्रशान्त वली - November 3, 2020 0
गुल्मी । राज्यले खेलकुदमा लगानी नगरेको गुनासो आइरहेका बेला गुल्मीमा भने रङ्गशाला निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ । इस्मा गाउँपालिका ६ अमरपुरस्थित...
आर्थिक संकट परेपछि पोर्न इन्डष्ट्रि प्रवेश गरिन् यी सुन्दरी (फोटोफिचर)
कला प्रशान्त वली - December 12, 2020 0
एजेन्सी । रेनी ग्रेसी अष्ट्रेलियाकी चर्चित सुपरकार चालक हुन् । आफुले जानेको कामवाट सोचेजति आम्दानी हुन नसकेको अनुभव गर्न थालिन् । आकर्षक कमाई हुने...
प्रदेश प्रशान्त वली - June 1, 2020 0
सुदुरपश्चिममा तत्काल लकडाउन गर्न चिकित्सकको सुझाव
Editor-Picks दीपक ओली - April 27, 2021 0
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र लगातार कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या बढेर भयावह रुप लिएको भन्दै चिकित्सकले तत्काल लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतबाट...
उच्च रक्तश्रावले १९ वर्षीया सुत्केरीको मृत्यु
Exclusive विश्वनाथ सिम्खाडा - May 18, 2021 0
कालिकोट । रास्कोट नगरपालिका स्थित १९ वर्षिय एक सुत्केरी महिलाको मृत्युु भएको छ । रास्कोट नगरपालिका–६ निवासि १९ वर्षिय निसा फर्सालको बच्चा जन्माईसकेपछि अत्याधिक...
दाङमा बसमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु
प्रदेश ५ प्रशान्त वली - November 11, 2020 0
तुलसीपुर । पश्चिम दाङमा पछाडीबाट आएको मोटरसाईकल बसमा ठोक्किदा एक जनाको मृत्यु भएका छ भने एक जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा बबई गाउँपालिका–६...
समृद्धिको अनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता शुरु
कला प्रशान्त वली - August 4, 2020 0
काठमाडौं । समृद्धि स्कुलको आयोजना तथा योङ्ग पिकासो प्रस्तुतिमा स्कुल लेभल अनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता शुरु भएको छ । विद्यालय तहका कक्षा ८ देखी यस...
रुपन्देहीमा मोटरसाइकल र कार ठोक्किँदा बाबुछोराको मृत्यु
प्रदेश ५ प्रशान्त वली - June 29, 2020 0
रुपन्देही । सैनामैना नगरपालिका– ८ कलौनीमा आज अपराह्न भएको सवारी दुर्घटनामा बाबुछोराको मृत्यु भएको छ । अपराह्न करीब २ बजे भएको दुर्घटनामा सैनामैना– १...
महेश्वर गौतम - June 22, 2021
डा. सुमनकुमार रेग्मी - June 22, 2021
प्रशान्त वली - March 5, 2020